Jid laga dhisayo Burco ilaa Ceerigaabo - BBC News Somali
Image caption Qalabka dhismaha ayaa laga keenay Shiinaha.
Waxaa rasmi ahaan u bilaabantay toddobaadka hawsha dhismaha wadada Burco ilaa Ceerigaabo oo laami laga dhigaayo.
Maareeyaha guud ee hay'adda horumarinta waddooyinka Somaliland, Professor Xasan Cali Cismaan, ayaa ku dhawaaqay bilowga hawshaasi oo qabanqaabadeedu socotay muddo sannad ah.
jidkan ceerigaabo ilaa Burco oo aad dhibaato badan gaadiidku ugala kulmaan waxaa dhererkiisu dhan yahay 284KM, sida uu sheegay maareeyuhu.
Wuxuu intaa ku daray Xasan Cali Cismaan, in lacag dhan lixdan Million oo dollar ay ku baxayso dhismaha jidkan laamiga laga dhigaayo. lacagtaasi waxaa ay ka imaneysaa cashuuro si gaar ah hore loogu saaray xoolaha la dhoofiyo iyo badeecadaha kale ee dekedda Berbera. Waxaa kaloo lacagta soo aruuriyay ganacsatada iyo qurba jooga reer Somaliland.
Jidkan oo dhismihiisu socon doono ilaa saddex sanno waxaa uu wax weyn ka tarayaa marka uu dhammaado isu socdka dadka ka sokow, xagga horumarinta dhaqaalaha ee dhoofinta xoolaha nool, iyo beeyada oo gobolka sanaag caan ku yahay.
Inkastoo markii hore oo la hindisaayay dhismaha jidkan ay dad badani khiyaali u arkayeen, laakiinse hadda waxaa suurtageliyay qalab badan oo culus, oo ah qalabka jidadka oo hay'adda wadooyinku ka keentay dalka Shiinaha dhowaan.